Ngoba amaKristu, umbuzo akufanele ube yini noma cha sizobe ulingelwa, kodwa siyosabela kanjani lapho senza. kuLuka 4:1-2, sifunda Ukulingwa kukaJesu nendlela abasabela. Nakhu okulalelwayo ethile intshumayelo emfushane ngashumayela lelo vesi esontweni lami kwezinyanga ezimbalwa emuva. Ngangifuna ukubheka isilingo kaJesu, khombisa ukuzindla ahlaziye ngokulalela kwaKhe, futhi sicabange ngalokho thina singafundani kule scene. Yiziphi izinto okufanele siyikhumbule lapho ulingwa? Nazi amaphuzu ayinhloko:
I. UNkulunkulu Ivumela futhi Usebentisa Nesilingo njengoba yecebo lakhe
II. Ubuthakathaka kuyinto ingelona ibhaxa ukuze ukunqotshwa yisilingo
Ukulingwa kukaJesu BragOnMyLord
Ngiyakhuleka kungcono wesikhuthazo kuwe
N-tahir • August 19, 2013 at 8:13 am • Phendula
James 1:13, “Makungabikho muntu athi lapho silingwa, “I am elingwa uNkulunkulu”; ngobe Nkulunkulu angeke alingwe ngalokubi, futhi Yena ngokwaKhe akalingi ubani.”
Ebube_nwadiei • August 19, 2013 at 8:13 am • Phendula
Yilokho ngifika lapha ukusho. UNkulunkulu akawasebenzisi isilingo, kodwa uzosikhulula kuzo uma simcela.
engaziwa • August 19, 2013 at 8:14 am • Phendula
Ukubeke kwacaca ukuthi neze bethi nguNkulunkulu esilinga kodwa uSathane, Umhlaba, nenyama yethu. UMoya kaNkulunkulu saholela uJesu ukuba nilingwe ngokungaphezu ngenxa yesizathu esithile. Bangani uNkkulunkulu usebenzisa zonke nesilingo, sinqobe izilingo, ngisho izono esizenza ngenxa inkazimulo Yakhe.
BPro_12 • August 19, 2013 at 8:15 am • Phendula
@ N-tahir @Ebube_nwadiei Sicela ulalele wonke ntshumayelo aphinde. Trip awusho ukuthi uNkulunkulu esilinga. Uthi umane athi uNkulunkulu uyakuvumela. UNkulunkulu evumela ukuze singase siphikelele ngokusebenzisa it ukuthembela kuye. Uma sikhetha ukubabekela phansi izifiso zethu zobugovu phambi kukaNkulunkulu zinikela nentando yakhe, umphumela uyoba nobuhlobo kangcono naYe, okuyinto ekugcineni lokho afuna nathi. Enye kungani abavumele into ebaluleke kakhulu kuye, INdodana yakhe kakhulu, afele esiphambanweni into akazange akwenze?
Nathaniel Babalola • August 19, 2013 at 8:15 am • Phendula
Uqinisile. Kodwa uNkulunkulu test us, like nje enzile Abrahama. U-Abrahama wabizwa akazizwa kodwa lwavivinywa